Window nciphisa / ingxaki ekwandiseni
kubalulekile Window nciphisa / ingxaki ekwandiseni
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #316 by JanneAir15
Molo! Xa ukunciphisa window FSX (oko ku Indlela window) kwaye khangela into kodwa ke ndifuna ukuba emva FSX kwaye ndiya nkulu i window kodwa ke yonke into iza kuhamba abamnyama. Akukho nto okanye kukho nje amanye ngesikhumba. Ndicela undincede ngale! Nam le ngxaki kuphela ibhityile payware (PMDG 777, Aerosoft Airbus bundle) kwaye Simulator na FSX lonikezelo. Ndiza kuzama ubeke imifanekiso kakhulu.
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #317 by Gh0stRider203
Ndiye le ngxaki izihlandlo ezimbalwa, ngokwaM. Maxa wambi ndithi Ukutshintsha imbonakalo, enceda, okanye ulinde imizuzu isibini iyakuba ukunicacisela ngokwawo up.
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo - iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #320 by Colonelwing
Bhota Janne ,,
Oku kwenzeka kum PMDG B737NGX on FSX Acceleration igolide ngoxa usebenzisa Key AltGr ngokusebenzisa Ngena kwi ubuncinane window yam Sim wekhusi window ,, kuyo could'nt umsebenzi ngendlela eyiyo, abamnyama screen zinjengezakho. Kodwa ukuba benze okufanayo kwi moya namnye payware ,, konke ukusebenza kakuhle ukubhobhoza phandle.
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #322 by JanneAir15
Eneneni mna sele iyicombulule le. Nabani na umntu ukuba le ngxaki ukuya eli khonkco: c-aviation.net/fsx-tweak/fsx-cfg-tweak-guide/
Ukusuka apho ukhuphele "UIAutomationCore.dll" kwaye dibanisa "HIGHMEMFIX = 1 'ukuba fsx.cfg. Oku kwandinceda. Uyakwazi ukufumana ulawulo fsx.cfg ukusuka% appdata% / Microsoft / FSX
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo - iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #325 by Colonelwing
info ikhonkco Good ,,, ngenxa FSX
Xa kukhankanywa njengento yintoni ngaloo ikhonkco isiza, ukuba ukwi FSX Steam wena dont eziyimfuneko imfuneko le fayile.
UIAutomationCore.dll - lwefayile ilayibrari DLL ophucula yokusebenza 32-isicelo iinkqubo 64-bit. Kufuneka ukulayisha kuyo indawo eneenkcukacha FSX engundoqo yakho ukuthintela iimpazamo Malume (phakathi kwezinye izinto). Mfuneko kwi FSX Edition Steam.
Ixesha ukwenza page: 0.212 imizuzwana